COVID-19: Vatengi uye #StayAtHome Kutenga Statistics | Martech Zone
COVID-19: Vatengi uye #StayAtHome Kutenga Statistics
Mugovera, Chivabvu 2, 2020 Mugovera, Chivabvu 2, 2020 Douglas Karr
Zvinhu hazvisi kutaridzika zvakanyanya kunaka kune ramangwana rehupfumi reumwe munhu zvakapihwa denda uye zvinotevera mirairo yekuvhara kubva kuhurumende kutenderera pasirese. Ini ndinotenda ichi chichava chiitiko chenhoroondo icho chichava nemhedzisiro, inogara kwenguva refu pasirese redu… kubva mukukwira kwebhizimusi kubhuroka nekushaikwa kwemabasa, kunyangwe kugadzirwa kwechikafu nekugadziriswa kwezvinhu. Kana pasina chimwe chinhu, denda iri rataridza kusasimba kwehupfumi hwedu hwepasirese.
Izvo zvakati, kumanikidzwa mamiriro seichi kunoita kuti vatengi nemabhizinesi agadzirise. Sezvo mabhizimusi anoita chikamu chavo uye vane vashandi vachishanda kubva kumba, tiri kuona kuwanda kugamuchirwa kwevhidhiyo kutaurirana. Zvichida isu tinosvika padanho rekunyaradzwa neichi chiitiko apo kufamba kwebhizinesi kunogona kudzikiswa mune ramangwana - kudzikisa mitengo yekushandisa pamwe nekubatsira nharaunda. Haisi nhau dzakanaka dzekufamba uye nendege maindasitiri, asi ndine chokwadi kuti vachachinjika.
OwnerIQ, yakawanikwa naInmar muQ4 2019, iri kupa zvishoma nzwisiso yekuti vatengi vari kuchinjira sei kune kwavo kutsva kwekugara pamba, kutenga kubva kumba, uye kugadzirisa maitiro avo ekutenga kune zvigadzirwa zvinoenderana. OwnerIQ akaongorora online shopper dhata kubva kuCoEx Platform yavo kuti vape iyo ruzivo, iyo yavakaratidza zvakajeka mune yavo infographic, Sei Vatengi vari #StayingHome.
Mutengi COVID-19 Maitiro Ekuchinja
Zviri pachena kubva kune infographic kuti vatengi vari kushandisa yekuwedzera mari pane dzinoverengeka zvinhu:
Hofisi-Yakabatana Midziyo - kunatsiridza kugadzikana kwavo uye negadziriro pavanenge vachishanda kubva kuhofisi yavo yekumba.
Musha Mamiriro - kuisa mari muzvinhu zvinoita kuti kugara pamba kunyaradze.
Personal Care - kuisa mari muzvinhu zvinodzikamisa pfungwa dzavo pamisungo yedenda nekuzviparadzanisa.
Home Care - nekuti tiri kushandisa nguva pamba uye kusaenda kunze, tiri kuisa mari muzvirongwa mukati uye nemukati memisha yedu.
Xtensio: Gadzira, Gadzirisa, uye Paridzira Yako Yekudyidzana Chibatiso